China Elastic Fastener E2031 Rail Clip ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rafitra fifadian-kanina | Lanling
Vidin'ny FOB: USD 1.0 ~ 1.6
Lanja: 0,8 kg / pcs
Ny elastika clip amin'ny lalambymampiasa ny bending deformation fampisehoana ny fitaovana sy ny torsional deformation fampisehoana ny fitaovana (indrindra ny boribory fizarana elastika clip), noho izany ny elastika dia tsara amin'ny ankapobeny, ary amin'ny ankapobeny tsy misy ny fiampitana. Noho izany, avo ny tahan'ny fampiasana fitaovana. Amin'ny boriborintany mahazatra, antenaina amin'ny ankapobeny fa ny fiaran-dalamby dia manana tsindry ambony sy elastika tsara. Amin'io lafiny io, ny clip elastika dia manana tombony mazava.
Ny fametahana lalamby tsirairay dia afaka mampiasa hery 18 taonina eo ho eo amin'ny lalamby. Na dia fomba mahazatra aza ny fametahana lalamby amin'ny fiarovana ny lalamby amin'ny lovia ifotony, dia misy fomba maro hafa hanatanterahana an'io asa io. Ny lalana tsy misy torimaso dia safidy mety indrindra ho an'ny rafitra lalamby haingam-pandeha. Ny hoho, ny seza ary ny clip dia fomba samy hafa rehetra hahazoana antoka fa miorina amin'ny tany ny lalana.
Teo aloha: Elastic Fastener E2063 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
Manaraka: W-endrika Elastic Rail Fastening SKL1 Rail Clip ho an'ny rafitra fastening Railway
Elastic Fastener E2063 Rail Clip ho an'ny lalamby Fa ...
Gauge Lock Clip, mpamatsy lalamby, e2055, clip amin'ny lalamby, clip elastika, rafitra fifamatorana lalamby,